» सपना रोका वा बिमाकुमारी अनुरागी, कुन टिमले जित्ला दोहोरी भिडन्त ?
सपना रोका वा बिमाकुमारी अनुरागी, कुन टिमले जित्ला दोहोरी भिडन्त ?
१० भाद्र २०७८, बिहीबार १९:०२
मकवानपुर, १० भदौ । नेपालकै चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को उत्कृष्ट ८ का लागि सातौँ दोहोरी भिडन्त निक्कै रोचक रह्यो । सातौँ दोहोरी भिडन्तमा सपना रोका र विजय बानियाँसँग सुरेन्द्र मगर र बिमाकुमारी अनुरागीले दोहोरी भिडेका थिए । गत हप्ता भएको यो दोहोरी भिडन्तमा बिमालाई निर्णायक चन्द्र शर्माले फाईभ स्टार दिएका थिए भने अन्य ३ जना निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए । त्यस्तै सुरेन्द्रलाई सबै निर्णायकहरुले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । सपनालाई दुई निर्णायकले फो स्टार र अर्का दुई निर्णायकहरुले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । विजयलाई एक जना निर्णायकले फो स्टार र बाँकी ३ जना निर्णायकहरुले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । गत साता निर्णायकहरुले बिमाको प्रस्तुतिलाई सर्वाधिक रुचाएका थिए । निर्णायकहरुले स्टारसँगै गोप्य रुपमा दिएका अंक र दर्शक भोटका आधारमा यो साता एक टिम उत्कृष्ट ८ का लागि छानिने छन् । यी दुई जोडीको यो कडा प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्ला त ? आखिर को जानेछ उत्कृष्ट ८ मा ? तपाईको विचारमा यी दुई जोडीमध्ये कुन जोडीको जित्ने सम्भावना बलियो छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट १६ मा पुगेका सातौँ जोडी हुन् सपना रोका र विजय बानियाँ ।.यसअघि उत्कृष्ट २४ को क्रममा उनीहरुले निर्णायकहरुबाट जम्मा ५६९.५ अंक प्राप्त गर्दै ९.५ अंकको अन्तरमा जीत हासिल गरेका थिए । फिजिकल अडिसनदेखि नै मिलेको जोडीका रुपमा चर्चामा आएका विजय र सपना गायक गायिकाकै रुपमा परिचय बनाईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । उनीहरु लाईभ दोहोरीमा चर्चित छन् । गायिका सपना रोक्का स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर ३ निवासी हुन् । हाल काठमाडौँमा बसोबास गरिरहेकी सपनाले पोखराबाट प्लस टु सकाएर काठमाडौमा आएपछि गायन क्षेत्रमा आफ्नो करियरको सुरुवात गरेकी हुन् । सानैदेखि मामाघरमै बसेर हुर्किएकी सपनाले संघर्षकैबिच दोहोरी गाउन सिकेकी थिईन् । उनले विभिन्न प्रतियोगिताहरुमा पनि सहभागी भएर जित हासिल गरेकी छिन् ।
गायक विजय बानियाँ गोरखाका हुन् । हाल उनी काठमाडौँको रातोपुलमा बस्छन् । बुवाआमा, ४ दिदी बहिनी र आफुसहितको ७ जनाको परिवारमा हुर्किएका उनी वि.सं. २०७३ सालदेखि औपचारिक रुपमा दोहोरी गायनमा लागेका हुन् । उनी लाईभ दोहोरीमा पनि चर्चित छन् ।
त्यस्तै दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट १६ मा पुगेका एघारौँ जोडी हुन् सुरेन्द्र मगर र बिमाकुमारी अनुरागी । यसअघि उत्कृष्ट २४ को क्रममा उनीहरुले निर्णायकहरुबाट जम्मा ४६०.५ अंक प्राप्त गर्दै ०.५ अंकको अन्तरमा जीत हासिल गरेका थिए । यो दोहोरी च्याम्पियनकै सर्वाधिक कम अन्तरमा हारजीत भएको दोहोरी भिडन्त थियो । बिमा र सुरेन्द्र दुबै नाम चलेका गायक गायिका हुन् । उनीहरु लाईभ दोहोरीमा पनि चर्चामा छन् । बिमाकुमारी अनुरागी दोलखाको जिरी नगरपालिका वडा नम्बर १ निवासी हुन् । सानैदेखि धेरै गीत मनपराउने उनी अग्रज कलाकारहरुलाई नियाल्दै कसरी गायन क्षेत्रमा लाग्न सकिन्छ होला भनेर सोच्ने गर्थिन् । अन्तत उनले आफ्नो गायिका बन्ने सपनलाई साकार पार्दै अगाडि बढिन् । उनी वि.सं. २०७३ सालेदेखि काठमाडौँमै आएर दोहोरी क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा लागेकी हुन् । उनले दोहोरी साँझबाट आफ्नो गायन यात्रा सुरु गरेकी हुन् । उनी बिमा अनुरागीका नामले पनि चिनिन्छिन् ।
गायक सुरेन्द्र मगर धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ निवासी हुन् । सुरेन्द्र फ्याली मगरका नामले पनि चिनिने उनी सानैदेखि दोहोरी गायनमा सक्रिय भएका थिए । मेला महोत्सव र विद्यालयको कार्यक्रमहरुमा पनि उनी गीत गाउने गर्थे । वि.सं. २०७० सालतिर गायन क्षेत्रमै लाग्ने गरेर काठमाडौँमा आएका सुरेन्द्रले दोहोरी साँझमा दोहोरी गाएर औपचारिक रुपमा व्यवसायिक दोहोरी गायनमा लागेका थिए । उनी विभिन्न दोहोरी प्रतियोगिताहरुमा सहभागी हुँदै थप निखारिएर दोहोरी क्षेत्रमा लागेका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–